Vinyl Flooring tsara indrindra Iverson
Ny akora fototra ho an'ny famokarana ny gorodona PVC dia ny polyvinyl chloride, izay loharano azo havaozina ara-tontolo iainana sy tsy misy poizina, ary efa nampiasaina betsaka izy io nandritra ny fotoana lava. Satria ny singa lehibe amin'ny gorodon'ny pVC dia ny plastika sy ny calcium carbonate, ny sosona fibre avo lenta dia miantoka ny fitoniana sy ny fahamarinan-toerana, noho izany dia tsy matahotra rano izy raha mbola tsy lena mandritra ny fotoana maharitra dia ho tsy ho simba, ary tsy ho ahitra noho ny hamandoana avo. Miova na mivadika endrika ambany fitaoman'ny maripana sy ny hamandoana. Amin'ny fiainana andavanandron'ny olona, ​​ny fikojakojana ny gorodona PVC dia mety tokoa. Raha maloto ny gorodona dia sasao amin'ny mop. Raha te hihazona ny gorodona haharitra hatrany ianao dia mila manafoana azy io tsy tapaka mba hikarakarana azy ireo.
Teo aloha: LVT Flooring 3d Floor Stickers Vinyl Plank
Manaraka: WPC Flooring PVC Namboarina vita amin'ny hazo plastika
LVT gorodona Self-adhensive PVC Plastika Vinyl F ...